युट्युबरलाई पत्रकार मान्दिनँ— स्वस्तिमा खड्का | eAdarsha.com
युट्युबरलाई पत्रकार मान्दिनँ— स्वस्तिमा खड्का
श्रावण २९, २०७६
काठमाण्डौ, २९ साउन । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का फिल्म हजार जुनीसम्मको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परिन् ।
उनले पारिश्रमिकलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिमाथि नायिका पूजा शर्मासँग जोडिएर समाचार बने । यस विषयमा असन्तुष्टि जनाएर उनले फेसबुकमा लामो स्टाटस नै लेखिन् । यसै पेरिफेरिमा रहेर नवीन प्यासीसँग उनले अनुभव साटेकी छिन् । हजार जुनीसम्मको फिल्मको ट्रेलर रिलिज प्रोग्राममा तपाईंले दिएको अभिव्यक्तिलाई नायिका पूजा शर्मासँग तुलना गरेर आए नि ?
मैले भनेको कुराप्रति म विश्वस्त छु । मलाई नायिका पूजा शर्माले यति पारिश्रमिक लिएको भन्ने थाहा थिएन । म घर आएपछि युट्युबमा पूजा शर्मासँग जोडिएको समाचार देखेँ । पूजाले २० लाख लिएको पनि मलाई थाहा थिएन । तर, मेरो अभिव्यक्ति लगानीसँग जोडिएको थियो । मैले व्यक्त गरेको विचारप्रति मलाई पछुतो छैन । मलाई चित्त नबुझेको कुराचाहिँ युट्युबरहरू एउटा क्यामेरा र माइक बोकेर कसले के भन्छ र कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्छ भनेर पर्खेर बसेका हुन्छन् । म उनीहरूलाई पत्रकार भन्दिनँ ।फिल्मको ट्रेलर रिलिज प्रोग्राममा जसले मेरोबारे त्यस्तो समाचार बनाए, उनीहरु नै साइडमा बसेर हल्ला गरेका थिए ।
पत्रकारिताप्रति तपाईंको धारणा के हो त ?
पत्रकारलाई विश्वास गर्छु, तर युट्युबरलाई गर्दिनँ । दुई वर्षदेखि उहाँहरूप्रति विश्वास छैन । युट्युबरहरू पत्रकार होइनन् । उनीहरूले पत्रकारिताको संस्कृति बिगारिरहेका छन् । न्युजपेपर र युट्युबरमा न्युजपेपर एकदम अथेन्टिक लाग्छ, मलाई ।
तपाईंले पूजा शर्माबारे बोल्नुभएको थिएन भन्नुभयो । तर, पूजासँगै जोडिनुभयो नि त ?
म पूजा शर्माप्रति लक्षित थिइनँ । उहाँले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ, यसमा शंका छैन । इमानदार दर्शकले मलाई माया नै गर्नुभएको छ । फेक दर्शकले छाडा बोल्नुहुन्छ ।
फिल्ममा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ । तर, जति कुरा आएका छन्, तपाईंको समकालीन अभिनेत्रीसँग निकै प्रतिस्पर्धाको भावना देखियो नि ?
नायिका पूजा शर्मासँग मेरो त्यस्तो मतलब नै थिएन । हामी खासै बोल्दैनौँ पनि । मैले ३० लाख भनेको भए पुष्प आउँथ्यो होला, ५० लाख भनेको भए अनमोल आउँथ्यो होला । २० लाख भनेकाले पूजा आइन् । तर, मैले लगानी सुरक्षाको कुरा गरेकी थिएँ । २० लाख लिँदा फिल्मले कमसेकम ५० लाख कमाउनुपर्छ । मेरो घरमा पनि निर्माताहरू हुनुहुन्छ । कति कमाउँदा निर्मातालाई फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । १५–२० लाख माग्छु भने कमसेकम ५० लाख मेरो साइडबाट कमाउनुपर्छ । मैले लगानीको मात्र कुरा गरेकी थिएँ । नायिका पूजा शर्मालाई जोड्ने नियत थिएन ।प्रायः युट्युबर एउटा क्यामेरा र माइक बोकेर कसले के गर्छ र कस्तो विवादास्पद कुरा गर्छ भनेर पर्खिएर बसेका हुन्छन् । यसप्रति मलाई कत्ति चित्त बुझेको छैन । म उहाँहरूलाई पत्रकार भन्दिनँ ।
अनि तपाईं फिल्म खेल्दा पारिश्रमिकको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
अवश्य हुन्छ । हामी दश वर्षपछाडि गइरहेका छौँ । हिरो–हिरोइनलाई पारिश्रमिकको तुलनामा सफल र असफल बनाउने । पारिश्रमिकको कुरा गर्दा मेरा लागि ठूलो कुरा होइन । मलाई राम्रो फिल्ममा लिन चाहने निर्माता हच्किन्छन् ।
तपाईं जुन तरिकाले विवादित हुनुभयो, यस्ता कुराले करिअरमा कति असर गर्छ जस्तो लाग्छ ?
पूरै असर गर्छ जस्तो त लाग्दैन । दर्शकले हेर्न जाने भनेको राम्रो फिल्म नै हो । मेरो श्रीमान् निश्चल बस्नेतकै कुरा गर्ने हो भने पनि राम्रो फिल्म भएकाले नै दर्शक गएका हुन् । बरु यस्ता कुरा बाहिर ल्याएर उहाँहरूकै मोरल डाउन हुन्छ । दर्शकले राम्रो काम हेर्न जाने हो, हल्लाको पछाडि लाग्ने होइन ।
अन्त्यमा भन्नुपर्ने कुरा केही छ ?
यो कुरा मात्र होइन, धेरै कुरा छ । मेरो बारेमा जसरी लेख्नुभयो, त्यो एउटा ठाउँमा छ । इथिकल हुनुस् भन्छु म । उहाँहरू काममा इमानदार हुनुहुन्न । मैले आफ्नो काम इमानदार भएर गर्ने हो ।
बस दुर्घटनामा ११ घाइते
रासस श्रावण १८, २०७८
गलकोट । बागलुङमा आज बिहान यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको गलकोट नगरपालिका–१ सौराहस्थित काठमाडौँबाट बुर्तिवाङतर्फ जाँदै गरेको…
ए डिजिभन लिग फुटबल कात्तिक अन्तिम सातादेखि
काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कात्तिक अन्तिम सातादेखि सञ्चालन हुने भएको छ । सो प्रतियोगिता आगामी कात्तिक २९…
एमबीलाई कौराहा पत्रकारिता पुरस्कार अर्पण
आदर्श समाज सम्वाददाता श्रावण १८, २०७८
पोखरा । नेपाल मगर पत्रकार संघ, कास्कीले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय मौलिक कौराहा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कार–२०७८ बाट कास्कीका…
सिर्जनाको वक्तृतामा रोशनी प्रथम
पोखरा । पोखरा ८ शान्तिमार्गस्थित सिर्जना आवासीय माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा नेपाली वक्तृत्वकला प्रतियोगिता भएको छ । अनलाइनमार्फत भएको प्रतिस्पर्धामा कक्षा…
विद्यार्थीलाई लागुपदार्थविरुद्ध सचेतना
पोखरा । हिलसाइड सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल मालेपाटनका ७५ जना विद्यार्थीलाई लागुपदार्थविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ । विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन…
जताततै भिडभाड, नाम मात्रको निषेधाज्ञा
सविन लामिछाने श्रावण १८, २०७८
पोखरा विमानस्थलको म्याद १ वर्ष लम्बियो
श्रावण १८, २०७८
सकिनै आट्यो रोपाइँ
श्रावण १७, २०७८
थप २ हजार ५६८ मा सङ्क्रमण
सेती नदी र पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई
बजारमा बीएस ६ सुजुकी एक्सेस १२५ स्कुटर
सडक लेन अनुुशासनसम्बन्धी साताव्यापी सचेतना
विजुलीका खम्बा चोरी गर्ने पक्राउ
फूलबारी क्लबमा हरिश्चन्द्र बास्तोला
श्रावण १६, २०७८
स्मार्ट लकडाउन : झनै बढ्न थाल्यो संक्रमण
One died, three missing when boat capsizes in Karnali River
COVID-19: 2,568 new cases, 2,020 recoveries, 18 deaths
Need for communist-led govt for development: KP Oli
Melamchi flood sweeps away 17 more houses
Buddha Air begins Pokhara-Nepalgunj direct flight
30 people fall ill after eating prasad in Sindhupalchowk
COVID-19: 3,106 new cases, 23 deaths, 1,916 recoveries